Munnyae Adwennwen | Mateo 6:25 | Bible Mu Nyansasɛm
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Maya Mixe (North Central) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Ngangela Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
TETE NYANSASƐM A ENTWAM DA
BIBLE AFOTUSƐM: “Munnyae sɛ mudwinnwen mo kra ho.”—Mateo 6:25.
Asɛm yi kyerɛ dɛn? Yesu kaa saa asɛm yi wɔ ne Bepɔw so Asɛnka no mu. Hela asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase ‘adwennwen’ no, Bible asekyerɛ nhoma bi kyerɛ mu sɛ, “Ɛyɛ biribi a obi yɛ bere a ahia no, asɛm ato no anaa ɔkɔm de no.” Yɛka sɛ obi redwennwen a, nea ɛtaa kyerɛ ne sɛ, ɔde daakye asɛm haw ne ho. Nea yebedi, nea yɛbɛhyɛ ne baabi a yɛbɛda de, yɛrentumi nka sɛ yebegyae ho dwen, na yɛrentumi nka sɛ nnipa a wɔbɛn yɛn no, yɛrennwen wɔn ho. (Filipifo 2:20) Ɛnde Yesu asɛm a ɔkae sɛ “munnnwinnwen” no kyerɛ dɛn? Yesu de, na afotu na ɔde rema. Ná ɔrema n’akyidifo ahu sɛ ɛnsɛ sɛ wɔde nea ebesi ɔkyena ho asɛm haw wɔn ho dodo. Nea ɛwom ne sɛ, sɛ obi de ɔkyena asɛm haw ne ho dodo a, etumi sɛe n’anigye.—Mateo 6:31, 34.
Yebetumi de asɛm yi abɔ bra nnɛ? Adɛn nti na ɛho hia sɛ yetie Yesu afotu no? Nhoma bi ka sɛ, sɛ obi dwennwen pii a, ɛma n’adwene yɛ adwuma boro so, na ɛba saa a, “etumi kɔtwe yare bi te sɛ yamkuru, komayare, ne ntehyewa brɛ no.”
Yesu ama yɛahu sɛ ɛho nhia koraa sɛ yebedwennwen de ahaw yɛn ho. Wo de tie asɛm a obisae yi: “Mo mu hena na sɛ odwinnwen a obetumi de basafa biako aka ne nkwa nna ho?” (Mateo 6:27) Sɛ yɛde yɛn adwene nyinaa si yɛn haw so a, ɛyɛ ɔkwa, efisɛ yɛrentumi mfa bere ketekete bi mpo nka yɛn nkwa nna ho, na kampɛsɛ yɛasesa nneɛma mu. Afei nso, sɛnea yesusuw sɛ nneɛma bɛyɛ daakye no, ɛntaa nsi. Nhomanimfo bi kyerɛɛ mu sɛ: “Wudwinnwen daakye ho a, ɛremfa wo nkosi baabiara, nea yedwinnwen ho no ntaa nsi mpo.”
Dɛn na ɛbɛboa wo ma woagyae adwennwen? Nya Onyankopɔn mu gyidi. Sɛ Onyankopɔn ma nnomaa aduan, ne nhwiren ntaade a, ɛnde nnipa a woyi wɔn yam som no no nso ɛ? Ɔremma wɔn nea wohia anaa? (Mateo 6:25, 26, 28-30) Mfa ɔkyena asɛm nhaw wo ho. Yesu kae sɛ: “Munnnwinnwen ɔkyena ho, na ɔkyena ankasa benya ne dadwen.” Wunnye nni sɛ adekyee biara wɔ “ne dadwen”?—Mateo 6:34.
Sɛ yetie Yesu afotu yi a, yɛrenkɔtwe yare biara mmɛto yɛn ho so. Eyi da nkyɛn a, yebenya biribi a ɛkyɛn so koraa; ɛno na Bible frɛ no “Onyankopɔn asomdwoe.”—Filipifo 4:6, 7.